Waa Maxay Covid-19|Balse Sidee Baad Uga Feejignaan Kartaa Caabuqan Saamaynta Ku Yeeshay Aduunka “Dr Shaafici Ismaciil” | Salaan Media
Waa Maxay Covid-19|Balse Sidee Baad Uga Feejignaan Kartaa Caabuqan Saamaynta Ku Yeeshay Aduunka “Dr Shaafici Ismaciil”
April 28, 2020 | Published by: yasin adan
Waa Maxay Covid-19|Balse Sidee Baad Uga Feejignaan Kartaa Caabuqan Saamaynta Ku Yeeshay Aduunka “Dr Shaafici Ismaciil” salaanmedia/Hargeisa…
Waxaan maqaalkan kooban kaga hadli doona xanuunkan aduunka sida ba’an u saameyay ee looyaqan carona virus ama covid 19.
Xanuunkan oo sida aynu wada ogsoonahay noqday midka sida aadka samaynta caafimaad , ta dhaqaale iyo ta isu socod ku yeeshay dunida, noqdayna dhibaato aduun oon cidna sooc u lahayn, isla markana samayntiisu dunida wada gaadhay bilo gudahood.
Iyadoo tiro badan oo dad ahi u dhinteen , tiro kalena uu soo ridanaayo malinba malinta ka danbaysa, tiro klena ay tahay sideyaal qarsoon oo wali gudbinaya.
Hadaba aan gudo galno mawduceena ugu horayn
•Waa maxay carona virus?
Carona virus ama covid 19 waa qoys fayrasyaa kuwaas oo sababa ama keena xanuuno sida hargabka'”common cold”, xanuun daran oo weerara laabta iyo sambabada oo looyaqan “SARS” severe acute respiratory syndrome” iyo midle east respiratory syndrome “MERS”.
Hadaba qoyskan fayrasyada ahi waxa ku dahaadhan walxo hide_sideyaal ah oo ka samaysan “protein spikes” kasoo u sahlaya inuu si fudud ugali karo jidhkena, isla markana uu u asiibi karo waxda u nugul.
Carona waa eray “latin” isla markana u taagan “crown” oo ah hab nashqadeedka ama muuqalka fayraskan.
•Xaguu ka bilaabmay?
Xanuunkan wuxu ka bilaabmay wadanka china khasatan magalada “wuhan” oo ahayd halkii uu ka dilaacay cabuqani dabayaqadii sanadii 2019kii, halkaas oo lagu arkay suuq kamida suuqyada hilibka xayawaanada lagu iibiyo oo loo yaqaan “huanan sea food whole sales market”
•Calamadaha lagu aqoon sankaro!!!!
Sida caadiga calamadaha ayaa soo muuqan kara 2 ilaa 14cisho kadib marka uu jidhka soo galo
□Neefta oo kugu yarata ama ba ku dhibta
□Qoyan sanka kasocda
Dadka qaar oo ay ka tagto urta iyo dhadhanku.
Calamadahan ayaa mara marxalado samayntoodu dhex dhexaad tahay amaba darantahay.
Dadka qaarna maba yeeshanba wax calamado ah
Sidoo kle dadka da, doodu wayntahay ama leh xanuunada sida macaanka, dhiig karka, wadne xanuunka, sambabo xanuunka iyo dadka difaacoodu hooseyo ayaa aad ugu nugul xanuunkan.
•Siduu ku fidaa xanuunkani?
Xanuunkan aya sida rasmiga wuxu ka imi xayawanka.
Mararka qaarna waxa jira xanuuno ka imaada xayaawanka oo u gudba bina aadamka “spill over” sidaasna uu bina aadamku isugu sii gudbin karo.
■Siyabaha la isugu gudbinkaro waxa kamida.
Marka qof xanuunki qaba qufaco ama hindhiso amaba uu hadlo dhibcaha afka iyosankisa kasoo baxaya waxay si toosa u galayan hawada isago ka gaadhi kara masoo ilaa 6feet amaba 2mtr ah.
Sidoo kale badhitaan la sameeyay waxa la cadeeyay in fayrasku mudo 3saac ah uu ku dhex noolan karo hawada
▪︎Is gacan qaadka
Meelaha huurka ee dadku ku badanyihin
Walax kasta oo uu tabto qof uu xanuunku haleelay.
•Daawo ma leeyahay xanuunku?
Ilaa hada wax daawo ah oo loo haya ma jirto .
Kaliya waxa lala taacala in calamadaha xanuunkun la daweeyo sida qandhada oo kle .
•Maxa lagaga hortagi kara xanuunkan?
Ku maydh gacmahaga saabun iyo biyo ugu yaraan 20sikin
Ka fogow la kulanka dadka iyo gacan qaadka
-U jirso dadka ilaa 6feet ama 2metr
-Ka fogow inaad tabato indhahaga iyo sankaga
-ku dabool afka iyo sanka suxulkaga markastoo aad qufacayso ama hindhisayso amaba se isticmaal tissue
-ka fogow wada isticmalka suxuunta , muryadaha , go yasha iyo alaabta kale guriga hadad xanuunsanayso ama ba shakido.
-joog gurigaga hatagin shaqadada, iskuulka iyo gobaha la isugu imaado hadad xanuusanyso amaba shakido
-hala raacin dadka basaska tagasida hadi aad xanuusanayso.
Hadaba ka fikir badqabka bulshadada iyo ehelkaga oo ka feejignow dhibaatadan calamiga ah ee aduunka ka jirta .
Waxan inta kusoo afmeeri doona qoraalki koobna ee aynu kaga hadlaynay cabuqan dunida aafeeyay ..